pixel 5 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Kuru Nhau & Ongororo Pixel 5 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Pixel 5 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Iyo Google Pixel 5 yakaziviswa, uye kunyangwe kuvuza uye runyerekupe zvinokanganisa kunakidzwa kwechakakura kuratidza, Google's new flagship inoita kunge yatogadzirira isu. Mushure mezvose, Google inofanira kutiratidza chimwe chinhu chakanaka!
Sezvo vamwe venyu mungaziva, iyo Pixel 4 uye iyo 4 XL vaive maviri eakatsoropodza zvine utsinye mureza we2019, uye nguva pfupi yapfuura kuvhurwa, mafoni maviri aya akadzikiswa zvakanyanya, kwete zvirinani nekuda kwevese vezvenhau vakashata vakakomberedza michina miviri. . Vanhu vazhinji vakaodzwa mwoyo nehukuru hudiki hwebhatiri paPixel 4, asi zvimwe zvakakosha zvaive zvisipo.
RunhareArena Pixel 5 Ongororo
Google Pixel 5 Mutengo : Google Pixel 5 Kuburitswa zuva : Google Pixel 5 Magadzirirwo
Google Pixel 5 Dhizaini uye Ratidza : Google Pixel 5 Kamera : Google Pixel 5 5G uye processor nyowani
Google Pixel 5 Bhatiri : Google Pixel 5 yaenda ndiyo radar
Google Pixel 5 Mutengo
Iyo Google Pixel 5 inouya pamutengo wekutanga we $ 699. Nehurombo gore rino hatisi kuwana yakakura Pixel 5 XL, asi Google yakazivisawo bhajeti-inoshamisira 5G chishandiso, iyo Google Pixel 4a 5G.
Iwe unogona ikozvino kutenga iyo Pixel 5 nechakanaka dhisikaundi kubva kuGood Buy:
Google Pixel 5 Wona mutengo Tenga kuAmazon $ 69999 Tenga paGoodBuy Ona zvese zvePixel 5 zvakanak kuita zvino
Google Pixel 5 Kuburitswa zuva
Iyo Pixel 5 yakaburitswa muna Gumiguru 15, 2020.
Google Pixel 5 tsananguro
Iyo Google Pixel 5 & apos; s zvirevo pano pazasi zvinoita sekuvimbisa pamutengo waro renji:
Snapdragon 765G chip (kwete chaizvo mureza 8xx processor, asi ichiri kukurumidza uye inokwanisa)
12.2MP kamera huru
6.-inch OLED kuratidza
8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetedza kwemukati kweiyo base modhi
Iyo Pixel 5 6-inch skrini ine yekumhanyisa 90Hz yekuratidzira mwero wekuzorodza, nepo kamera system ichitamba 12.2MP main kamera ine 0.5x yakafara lens, uye yayo 4,080mAh cell inotsigira 15W isina waya uye 5W inodzosera isina waya kuchaja. Zvese zvirevo zveGoogle Pixel 5
Google Pixel 5 Dhizaini uye Ratidza
Iyo Pixel 5 ine dhizaini-yazvino inotaridzika ine 6.0-inch OLED kuratidza, iine 100% -recycled aluminium yakavharirwa yeimba yekumashure uye furemu yealuminium. Kuchengetedza kubva muguruva nemvura, iyo Pixel 5 inouya neiyo IP68 chiyero.
Google yakagadzirawo chirebvu cheiyo smartphone diki kuitira kuti chiratidziro chitenderedzwe nemabhezera akapfava echiitiko chinonyudza.
Pamusoro pesimbi yayo kumashure, tinowana iyo mbiri-kamera system bump, inovhara iwo maviri makamera ePixel 5.
Kunyangwe iyo Pixel 5 mitambo yealuminium kumashure iyo inoita kuti inzwe yakasimba uye yakasimba muruoko, ichiri kutsigira isina waya kuchaja. Google ine mhinduro inonakidza padambudziko iri (aluminium haina & apos; haibvumire masaini ekuchaja asina waya kuti afambe nawo): akacheka musimbi kumashure kwePixel 5 iyo yakafukidzwa netete biorеsin zvinhu uye inobvumira isina waya kuchaja.
Zvemavara, Google yakaendazve zvakareruka nekubata kutonhorera muzvirongwa zvekupa mazita. Iyo Pixel 5 inouya mune maviri anowanikwa mavara: Ingori Nhema uye Sorta Sage. Kunyangwe ndeipi yaunosarudza inozopedzisira yaenderana neyako maitiro, unogona kutarisa yedu gwara pane iro Pixel 5 ruvara rungakuteedzere iwe zvakanyanya .
Google Pixel 5 Makamera
Yekukurumidza nhoroondo yechidzidzo pane Google Pixel makamera
Mukuburitswa kwayo parunhare, Google iyi ikambani isinganzwisisike iyo inotaura chinhu chimwe gore rino uye inoita zvakakwana zvakatarisana gore rinouya.
Mu2016, yaive kurumbidza iyo headphone jack uye kutora jabs kuApple nekushaya iyo mumaPhones avo, saka, gore rimwe chete gare gare, mu2017 yakaiuraya paPixel 2 nhepfenyuro uye yakabvisa iyo promo vhidhiyo kubva gore rapfuura.
Mu2017, Google yaiseka zvakare Apple uye ichiti pakanga pasina `` yechipiri '' kamera paPixel, saka, mu2019, unozivei, iyo Pixel 4 yakavhurwa neyechipiri kamera uye telephoto imwe senge iPhones dzinoshandiswa kwemakore.
Nekukurumidza kumberi ku2019, uye Google yanga ichiti inonzwa kuti hapana chikonzero cheiyo Ultra-wide-angle lens pane iyo Pixel 4 akateedzana. Iwe unoziva kuti izvi zvinorevei, handizvo? Ndinyengerei kamwe, ndinokunyadzisa iwe, ndipusise kaviri, ndinonyadzisa ... uye isu tava kuziva zvirinani: iyo Google Pixel 5 ichave iine Ultra-wide-angle lens. Uye nokutendeseka, isu tinotarisira kuti ichaita sezvo iyo kamera iri imwe yezvatinofarira maficha pane mamwe mafoni mafoni.
Iyo Pixel 5 inouya neayo-maviri-kamera system, yakakosha sensor ye12.2MP uye Ultra-yakafara sensor ye16MP. Sezvatakatarisira, Google yakanaka nemufananidzo wayo wekugadzira software uye iyo Pixel 5 zvirokwazvo sarudzo yekutarisa kana iwe & apos; tichitarisa mukutenga foni ine kamera inokwanisa kwazvo. Yedu Pixel 5 ongororo ine yakawanda kamera masampuli echigadzirwa kuti utarise.
Google Pixel 5 kamera sampuro, kune mamwe masampuli, tarisa yedu Pixel 5 ongororo yakabatana pamusoro
Pixel 5 inounza 5G uye processor nyowani
Gore rino, Google yakafunga zvekusvetuka iyo Snapdragon 865 processor uye pachinzvimbo yakasarudza yakaderera-mutengo asi ichiri kugona kwazvo Snapdragon 765G. Iyi danho inoitendera kuti itengese foni mumutengo unodhura kwazvo. Pamitengo iyoyo, iyo Pixel ichanyatso kumira pamwe neayo kamera uye ine mukana uri nani kwazvo wekukwikwidza pane pawakaiisa mumakwikwi anotyisa $ 1000 + mutengo renji. Iyo Snapdragon 765G zvakare chip inokwanisa kuunganidzwa kwe5G, saka iwe wakakunda & apos; usape zvibodzwa zvekumhanyisa munzira ipi neipi yakakosha.
Panyaya yekuita, iyo Snapdragon 765G inononoka kupfuura iyo 865, neGeekbench zvibodzwa zvichiratidza musiyano wakakura weimwe nzvimbo pakati pe30% uye zvakanyanya se50%.
Kunyangwe izvo, inokwanisa Snapdragon 765G inopa yakanaka chiyero pakati pemutengo uye mashandiro uye nekuwedzera inotsigira 5G, izvo zvakaita kuti ive sarudzo inozivikanwa pakati pevatengesi ve smartphone.
Google Pixel 5 Bhatiri
Nepo mashandiro paPixel 5 angangotora rova, iyo nyowani chip inogona zvakare kuve ine simba-inoshanda.
Mukupera kwegore ra2019, iyo indasitiri yakatanga kufamba ichienda kune akakura mafoni ane mabhatiri akakura, chiitiko icho vazhinji vaongorori nevashandisi vanga vachishuvira. Google yakaregeredza maitiro aya muPixel 4 akateedzana uye yakabhadhara mutengo sezvo foni yaive ichiwana hupfupi bhatiri hupenyu (kunyanya diki Pixel 4).
Google ichaenda kunobatsira kubva kune inowedzera simba-inoshanda Snapdragon 765G uye yakakura 4,080mAh bhatiri sero.
Pamusoro pezvo, iyo Pixel 5 inoratidzira 15W inokurumidza kuchaja rutsigiro uye 5W reverse isina waya kuchaja.
Hapana radar gimmicks paGoogle Pixel 5
Kwemakore, Google yakashanda pane yakavanzika super-sensitive radar pfungwa inonzi Project Soli, uye mu2019, iyo yepamusoro-tekinoroji tekinoroji yakauya kune chaiyo foni, iyo Pixel 4. Uye yaive yakakwana uye kutaura zvisina maturo, sekungofanana nemazhinji akadaro mazano mu zvakapfuura.
Iyo nyowani 'Motion Sense' tekinoroji iyo yaifanirwa kushandura nzira yatinofambisa nayo mafoni edu kubva pakushandisa swipes uye matepi kungoita chete, yakazova imwe gimmick iyo yaikubvumidza iwe kushamisika kusvetuka pamusoro pefoni yako kusvetukira kurwiyo runotevera uye izvo zvaive nezvazvo zvekuita. Kutambisa nzvimbo kwakadii!
Uye zvirokwazvo, zvakatora nzvimbo yakawanda. Kunyange mafoni mazhinji emazuva ano aine magadzirirwo akanaka aine bezel shoma, iyo Pixel 4 ine bezel rakakura kumusoro kwese kweiyo gimmicky tech. Google inoita kunge yakaziva kuti zano harinyatsoita musoro uye rakabvisa iro muPixel 5 kuti ipe dhizaini yazvino.
Nei sprint ichinonoka 2020
google tamba mwedzi mina mahara
velodyne vleve panzeve headphone
Maitiro ekudzora saizi yeBrowser Window muWebDriver
Major Galaxy Watch 4 inoshandura kuburitsa kunoratidzira dhizaini nyowani mune ese mavara
Tarisa Samsung Gear VR inofambiswa neiyo Galaxy Note 4 kushamisika pamusoro pevanhu vese, 'Zvakare chaizvo!'
ZTE ZMAX yekutengesa yakamiswa neT-Mobile uye MetroPCS sezvo vatengi vachiedza kubheja mubhatiri
Apple & apos; s Inorova Powerbeats Pro yechokwadi isina waya nzeve dzave ikozvino nzira yakachipa kwazvo kuramba
iPhone XS Max ndiyo inorema kupfuura Apple foni
Vhidhiyo inoratidza kukura kwakaita Android kutonga pasi rese mushamba weOS musika
Iyo Samsung Gear S2 Classic 3G inotangisa nhasi paAT & T, T-Mobile, uye Verizon